Ity Herinandro Ity Tao Amin’ny Bilaogy Palestiniana: Indray Andro Hono · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Janoary 2018 14:43 GMT
Sary: Raising Yousuf Little Yousuf (herintaona sy 8 volana) nilalao tao anaty tanim-boatavo tao Maryland ary nanome sakafo ho an'ireo osy an-trano sasany tany Etazonia. Andro vitsy taty aoriana, nifanintona, natahotra sy tsy nahita izay tokony atao izy.
Sary: Angela Nijanona i CafeLulu mba hankafy ny fialan-tsasatra masoandro mody, izay azo antoka fa nilainy tao anatin'ny fiainan-tsarotra.
Sary: AquaCool Eman nampahatsiahy ny diany vao haingana tany Londra, ny fihaonambe sy ireo bilaogera nihaona taminy.
Sary: Living in Gaza City Mankafy ny akanin-jaza sy garabola misy azy ireo ao Gaza i Amal sy Maryam, vao ny alina talohan'ity sary nalaina ity, tsy afaka natory izy ireo, tsy maintsy nanazava ny dikan'ny feo fipoahana ren'izy ireo kosa ny renin'izy ireo antsoina hoe Imaan.
Sary: Standing Witness Nosamborin'ny Israeliana ny naman'i Sahar antsoina hoe Omar, roapolo taona izy, ary vao avy nahazo vatsim-pianarana ka faly satria afaka hivoaka ao amin'ity toerana ity izy. Taorian'ny zava-nitranga, mety tsy afaka mandeha na aiza na aiza izy ankehitriny.
Tsy mitsahatra ny manova tarehy aho ary tena mivaha, hoy ny namako Ohoud nilaza fa nahita peratra teny an-danitra saingy tsy mino azy aho! Indray andro izy nitaraina mikasika ireo fiara fitateram-bahoaka namboarina ho an'ny olona fohikely.
Manana feo tena mahafinaritra i Ohoud, mahafinaritra hatrany ny eo akaikiny sy mihaino azy mihira am-pahafinaretana ho an'ny olony sy ny taniny, na milalao ny hira ankafiziny. Nampiseho sary sasantsasany misy an'i “Israely” tamin'ireo mpianany Gaza kosa i Tower Keeper, ary nampiseho sarin'”Isiraely” vitsivitsy ho an'ny mpianany ao Gaza sy ny sarin'i Gaza vitsivitsy tamin'ny Israeliana izy, samy tsy nino ny roa tonta fa mijery any ambadiky ny fefy izy ireo. Rehefa tany Palestina nandritra ny telo volana i Bob dia nanao veloma ny namany, efa nody izy izao.
Momba anay sisa tavela, tsy nanjary ny vokatra azonay tamin'ny famokarana oliva tao Tubas satria nakatona ny hany toerana fisavàna navela hivarotanay oliva ho an'ny mpivarotra israelianina. Etsy andanin'izany, notononin'ny The Times ho toy ny fanomezana krismasy ny menaka olivanay.
Oh, sao adinoko, mirary krismasy sambatra ho anao i PHALASTEEN !